Amosa 4 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
4 “Henoy izao, ry ombivavin’i Basana,+ izay eo an-tendrombohitr’i Samaria,+ dia ireo manambaka ny madinika+ sy mampahory ny mahantra ary milaza amin’ny tompony hoe: ‘Aza mitondra tanam-polo rehefa mody, ary andao isika hisotro!’ 2 Mianiana amin’ny fahamasinany i Jehovah+ Tompo Fara Tampony hoe: ‘“Ho avy aminareo ny andro hanaingany anareo amin’ny faraingon’ny mpivaro-kena, ary hanaingany ny sisa aminareo amin’ny lelam-pintana.+ 3 Eo amin’ny manda voagorobaka no hivoahanareo,+ samy araka izay hitsiny avy. Ary horoahina ho any Harmona ianareo”, hoy i Jehovah.’ 4 “‘Tongava ao Betela, ka aoka ianareo handika lalàna.+ Ary manaova toy izany matetika ao Gilgala.+ Amin’ny maraina, dia ento ny sorona atolotrareo, ary amin’ny andro fahatelo ny ampahafolon-karenanareo.+ 5 Zavatra misy lalivay no anamboary sorona fisaorana, ka dory izany mba hidona-tsetroka,+ ary manaova antso avo fa hanao fanatitra an-tsitrapo+ ianareo. Ambarao ampahibemaso izany, satria izay no tianareo, ry zanak’Israely ô’,+ hoy i Jehovah Tompo Fara Tampony. 6 “‘Nataoko mosarena*+ ianareo tany amin’ny tanàna rehetra nonenanareo, ary tsy nanan-kohanina tany amin’izay rehetra nisy anareo.+ Tsy niverina tamiko anefa ianareo’,+ hoy i Jehovah. 7 “‘Ary nahantoko tsy hilatsaka taminareo ny orana, nefa mbola nisy telo volana vao tonga ny fijinjana.+ Koa nandatsahako orana ny tanàna iray, fa tsy nandatsahako kosa ny hafa. Nilatsahan’ny orana ny sombin-tany iray, fa ny iray kosa maina+ satria tsy nandatsahako orana. 8 Nivembena nankany amin’ny tanàna iray ny tanàna roa na telo mba hisotro rano,+ kanjo tsy afa-ketaheta. Tsy niverina tamiko anefa ianareo’,+ hoy i Jehovah. 9 “‘Nataoko mainan’ny rivotra mahamay sy tratran’ny aretin-javamaniry ny volinareo.+ Nitombo ny isan’ny zaridaina sy ny tanimboalobokareo, kanjo lanin’ny fanday ny hazo aviavy sy hazo olivanareo.+ Tsy niverina tamiko anefa ianareo’,+ hoy i Jehovah. 10 “‘Nandefasako areti-mandringana toy ny tany Ejipta ianareo,+ ary novonoiko tamin’ny sabatra ny tovolahy teo aminareo,+ sady nobaboina koa ny soavalinareo.+ Nakariko hatreo am-bavoronareo ny hamaimbon’ny tobinareo.+ Tsy niverina tamiko anefa ianareo’,+ hoy i Jehovah. 11 “‘Noravako ny taninareo toy ny nandravako an’i Sodoma sy Gomora,+ ary lasa toy ny kitay nosarihana haingana avy tao anaty afo ianareo.+ Tsy niverina tamiko anefa ianareo’,+ hoy i Jehovah. 12 “Koa izany no hataoko aminao, ry Israely. Eny, hanao izany aminao aho, ka miomàna hifanatrika amin’Andriamanitrao,+ ry Israely. 13 Fa ilay Mpamolavola ny tendrombohitra+ sy Mpamorona ny rivotra,+ Ilay mampahafantatra amin’ny zanak’olombelona ny heviny,+ Ilay mahatonga ny mazava ratsy ho maizina,+ Ilay manitsaka ny toerana avo eto an-tany,+ dia Jehovah Andriamanitry ny tafika no anarany.”+
^ A.b.t.: “Nomeko fahadiovan’ny nify.”